Sat, Jul 21, 2018 | 15:17:21 NST
‘सिमलको गीत’ का कविताको आयु लामो
काठमाडौं, जेठ ८ – साहित्यकार गीता त्रिपाठीको नयाँ कविता संग्रह ‘सिमलको गीत’ को अन्तर्क्रिया कार्यक्रम काठमाडौंमा भएको छ ।
गफाडी - साथीहरु खाजा खाईरहेको ठाँउमा कलेटी परेको फुस्रो ओठ लिएर, ऊ आयो हात लम्कायो, सुख्खा रोटी समायो कपाकप खायो र गफ लगायो केफसी त भन्नु मात्रै हो, डेलिभरी झुर रहेछ पिज्जा अर्डर गरेको दुई घण्टासम्म नि ल्याउँदैन, मलाई त साथीहरुले टन्न खाजा खुवाईहाल्नु भयो अब ल्यायो भनेपनि कस्ले खाला खै त्यो पिज्जा ?
काठमाडौं, जेठ ८ – युगकवि सिद्धिचरण श्रेष्ठको १०५ औँ जन्मजयन्तीका सन्दर्भमा शनिबार विभिन्न साहित्यकारले उहाँको स्मरण गर्नुभएको छ ।
काठमाडौंको बबरमहलमा ‘पोखराको पानी रंग’
काठमाडौं, जेठ ७ – पोखराका कलाकारले भिन्न शैलीमा बनाएका चित्र काठमाडौंको बबरमहलस्थित नेपाल आर्ट काउन्सिलमा पदर्शनीमा राखिएको छ ।
रबिन्द्रनाथ टेगोरको सम्झनामा कार्यक्रम
काठमाडौं, जेठ ५ – नेपाल स्थित भारतीय दूतावास र बिपी कोइराला भारत नेपाल फाउन्डेनको आयोजनामा काठमाडौंमा कवि रबिन्द्रनाथ टेगोरको सम्झनामा एक कार्यक्रम भएको छ ।
शंखधर साख्वा बारे बन्दै गरेको एनिमेशन चलचित्रको गीती एल्बम सार्वजनिक
काठमाडौं, जेठ ४ – नेपाल सम्वतका प्रवर्तक शंखधर साख्वाको जीवनीबारे बनाउँदै गरेको एनिमेशन चलचित्र द लिजेन्ड अफ शंखधरको अडियो गीत एल्बम बेलायतको लण्डनमा सार्वजनिक गरिएको छ ।
कोरियन लेखिकाले जितिन् अन्तर्राष्ट्रिय बुकर पुरस्कार
जेठ ४ – कोरियन लेखिका हाङ काङको पुस्तक द भेजिटेरियनले यो वर्षको म्यान अन्तर्राष्ट्रिय बुकर पुरस्कार जितेको छ ।
मोबाइलको सिमकार्ड जत्रो पुस्तक सार्वजनिक
काठमाडौं, जेठ १ - साहित्यकार सुनिल पुरीको हाइकु सङ्ग्रह गाभा सार्वजनिक भको छ । साढे एक सेमी लम्बाइ र एक सेमी चौडाइको गाभा कृति सम्भवत नेपालकै सानो आकारको कृति हो ।
पत्रकार तथा गीतकार क्षेत्रीको सम्झनामा अनलाइन दोहोरी
युएई , जेठ १ – पत्रकार तथा गीतकार सूर्यकुमार क्षेत्रीको सम्झनामा अनलाइन दोहोरी सम्पन्न भएको छ । युएईमा बस्दै आएका पाल्पालीले सञ्चालन गर्दै आएको अनलाइन पाल्पा तानसेन रोधीघरमा दिवंगत पत्रकार तथा गीतकार क्षेत्रीको स्मृतिमा दोहोरी गीत प्रतियोगिता आयोजना गरिएको हो ।
​थिएटर मलमा एकल नाटक अन्तिम सातामा
काठमाडौं, वैशाख २९ - काठमाडौं मल सुनधारास्थित नाटकघर थिएटर मलमा प्रा. डा. अभि सुवेदीद्वारा लिखित एकल काव्यात्मक नाटक ‘यो कुनै बास हो एक’ अन्तिम सातामा मञ्चन भइरहेको छ ।
काठमाडौं, वैशाख २७ – चार वर्षअघि पलेँटी उत्सवका लागि नेपाल आउँदा संगीतकार शान्ति ठटाललाई आफ्नो अन्तिम नेपाल यात्रा जस्तो लागेको थियो । तर अहिले फेरि उहाँ नेपालमै हुनुहुन्छ ।
काठमाडौं, वैशाख २५ – साहित्यकारले छन्द काव्यको प्रयोग हराउँदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । छन्द काव्य बचाउ अभियानले शुक्रबार छन्द काव्य परम्पराः हिजो, आज र भोलि विषयक अन्तक्र्रियामा साहित्यकारले छन्द काव्यको प्रयोग हराउँदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।
एक्लै मुस्कुराउछौं, एक्लै कुरा गर्छौ, को सँग मुस्कुराउँछौं, कसरी कुरा गर्छौ ? तिमी क्षणक्षण मुस्कुराउँदा यस्तो लाग्छ तिमी दा भिन्चिको अगाडि बसेकी मोनलिसा हौ ।
नयनराज पाण्डेको सल्लीपिर विमोचित
काठमाडौं, वैशाख १८ – साहित्यकार नयनराज पाण्डेको उपन्यास ‘सल्लीपिर’को शनिबार विमोचन गरिएको छ ।
विनोद चौधरीको आत्मकथा ‘मेकिङ इट बिग’ लाेकार्पण
काठमाडौं, वैशाख १७ – चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरीको आत्मकथा ‘मेकिङ इट बिग’ लोकार्पण भएको छ । पेन्गुइन बुक्स इन्डियाले प्रकाशन गरेको पुस्तक भारतमै लोकार्पण गरिएको हो ।
फरक प्रतिभा भएका कवि सापकोटाको सिडी लोकार्पण
काठमाडौं, वैशाख १४ – फरक प्रतिभा भएका कवि वियोग सापकोटाको रचना तथा संगीतकार गायिका लोचन भट्टराईको संगीत तथा स्वर रहेको गीति संहग्र वियोगको लोकार्पण भएको छ ।
विश्व पुस्तक दिवसमा पुस्तक आदान प्रदान तथा पुस्तक चर्चा कार्यक्रम
काठमाडौं, वैशाख ११ – विश्व पुस्तक दिवसको अवसर पारेर काठमाडौंमा शनिबार पुस्तक आदान प्रदान तथा पुस्तक चर्चाका कार्यक्रम भएको छ ।
पुस्तक र पुस्ता : नबिग्रने सम्बन्ध
‘पुस्तक पढ्नु, नदीमा नुहाउनु जस्तै हो’ ग्रिक दार्शनिक हेराक्ल्टिसको यो भनाईले मानव जीवनमा अध्ययनको महत्वलाई प्रष्ट पारेको छ । नदीमा हरेक दिन नुहाउँदा नयाँ स्फुर्ती मिले जस्तै पुस्तक अध्ययनले पनि नयाँ स्फुर्ती र ज्ञान दिन्छ ।
दुर्गाबाबु पाठकको सम्झनामा
काठमाडौं, वैशाख ७ - साँँचै यी गीतका शब्द जस्तै मिठो स्वरका धनी सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक दुर्गाबाबु पाठक दुई दिनको पाहुना जस्तै गरी अल्पायुमै यस धर्तीबाट टाढा भएका छन् ।
बच्चु कैलाश : हामी जीवन भोग्दछौँ र गीतमा पोख्दछौँ
बच्चु कैलाश नेपाली सुगम संगीतमा थोरै गीत गाएर पनि स्थापित गायक हुन् । विसं १९९५ साउन १५ गते काठमाडौंमा जन्मनु भएका गायक कैलाशले गीत गाउन सुरु गरेको ५६ वर्ष पुगेको छ । उहाँको पहिलो गीत कल्पनाको गगन मुस्कुराउने चन्द्र बनन निकै चर्चित छ ।
शुभ कामना २०७३
जगन्नाथ शर्मा अतीतमा दुःख खपी गरी श्रम । सशक्त पार्टी हुन गो क्रमै क्रम । मिलेमतो आपसमा हुँदा जति। विफाइदा हुन्छ र के कहाँ कति ।
संगीतकार अम्बर गुरुङलाई राष्ट्र गायकको रुपमा सम्मान
काठमाडौं, वैशाख १ – राष्ट्रिय गानका संगीतकार अम्बर गुरुङलाई राष्ट्र गायकको उपाधिले सम्मान गरिएको छ । काठमाडौंको बुढानिलकण्ठमा एक विशेष कार्यक्रमबिच गुरुङलाई रक्षामन्त्री भीम रावलले राष्ट्र गायकको उपाधिले सम्मान गर्नुभएको हो ।
अम्बर गुरुङलाई राष्ट्र गायकको रुपमा सम्मान गरिँदै
काठमाडौं, वैशाख १ – राष्ट्रिय गानका संगीतकार अम्बर गुरुङलाई राष्ट्र गायकको उपाधिले सम्मान गरिँदैछ । बुधबार काठमाडौंको बुढानिलकण्ठमा एक विशेष कार्यक्रमकाबिच गुरुङलाई राष्ट्र गायकको उपाधिले सम्मान गरिने भएको हो ।
प्रगतिशील लेखक संघको अध्यक्षमा प्राज्ञ पोखरेल निर्विरोध चयन
काठमाडौं, चैत २८ - प्राज्ञ मातृका पोखरेल प्रगतिशील लेखक संघ नेपालको अध्यक्षमा निर्विरोध चयन हुनुभएको छ । काठमाडौंमा शनिबार राति सम्पन्न संघको १० औं राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्राज्ञ पोखरेल अध्यक्षमा चयन हुनुभएको हो ।
कथा–यस्तो लुगा लाउँदा मिस नेपाल भइन्छ त ?
मिलन तिमिल्सिना - सधैँ झैँ साँझ पर्न थालेपछि उनी गाग्री बोकेर आइन् । इनारको छेउमा गाग्री राखिन् । ‘आज त तैंले धेरै बोकिस् होला है ईंट्टा’ पानी भरिरहेकी अर्कीले सोधिन् । ‘दिनभरी पेट दुखेर कस्तो, आज त २०० ईंट्टा नि बोक्न पाइन’ खिन्न हुँदै उनले भनिन् ।
​गोरखामा वैैशाख ४ गते संगीत महोत्सव
गोरखा, चैत २३ - गोरखामा नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आगामि वैशाख चार गते संगीत महोत्सव गर्ने भएको छ । महोत्सवमा प्रतिष्ठानले छनौट गरेका कलाकार र गोरखाका नयाँ कलाकारले गीत संगीत प्रस्तुत गर्नेछन् ।
सुरक्षित वैैदेशिक रोजगारीको सन्देश दिन सडक नाटक
सागरविक्रम बस्नेत/रामेछाप । चैत १९ – रामेछापका विभिन्न गाविसमा वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी नाटक प्रदर्शन गरिएको छ । सडक नाटकमा विदेशिने युवाका भोगाई, वैदेशिक रोजगारीका कारण उत्पन्न सामाजिक तथा पारिवारिक समस्यालाई नाटक मार्फत प्रस्तुत गरिएको छ ।
​स्वदेश फर्किए संगीतकार गुरुङ (तस्बिरहरु)
अर्जुन पोख्रेल/उज्यालो । काठमाडौं, चैत १७ - भारतको दिल्लीमा उपचार गराएर बरिष्ठ संगीतकार अम्बर गुरुङ स्वदेश फर्कनु भएको छ । नयाँ दिल्लीको मेदान्त अस्पतालमा घाँटी र पाचन नलीको उपचार गराएर स्वास्थ्यमा सुधार आएपछि संगीतकार गुरुङ स्वदेश आउनु भएको हो ।
वरिष्ठ संगीतकार अम्बर गुरुङ भोलि स्वदेश फर्किने
काठमाडौं, चैत १६ – दिल्लीमा उपचार गराउन जानुभएका वरिष्ठ संगीतकार अम्बर गुरुङ बुधबार नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ । स्वास्थ्यमा सुधार अाएपछि उहाँलाई अस्पतालले डिस्चार्ज गरिसकेको छ ।
​जर्मन अन्तर्राष्ट्रिय नाटक महोत्सवमा सर्वनामको मुक्ति
काठमाडौं, चैत ८ – जर्मनीमा भइरहेको ३२ औँ अन्तर्राष्ट्रिय नाटक महोत्सवमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै सर्वनाम थिएटरले नाटक मुक्ति प्रस्तुत गरेको छ ।
विश्व कविता दिवस मनाईँदै
काठमाडौं, चैत ८ – विश्व कविता दिवस सोमबार विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाईंदै छ । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले कविता गोष्ठी आयोजना गरेको छ । यस्तै भक्तपुरमा पनि विशेष कार्यक्रम हुँदैछ । अरु साहित्यिक संघ–संस्थाले पनि कार्यक्रम गर्दै छन् ।
साहित्यमा हाइकु भित्र्याउने निबन्धकार शंकर लामिछानेलाई सम्झने दिन
काठमाडौं, चैत ५ - आज निबन्धकार शंकर लामिछानेको ८८ औँ जन्मजयन्ती । उहाँको सम्झनामा विभिन्न कार्यक्रम हुँदैछन् । वि.सं. १९८४ साल चैत ५ गते बुबा हरिप्रसाद लामिछाने र आमा राजकुमारीका जेठा छोराका रुपमा काठमाडौंको जैसीदेवलमा जन्मिएका लामिछानेको एब्स्ट्रयाक्ट चिन्तनः प्याज निबन्ध संग्रह निकै चर्चित छ ।
प्रजातन्त्रका लागि साहित्यकारले गिरफ्तारी दिएको दिन
काठमाडौं, चैत ३ – बुधबार चैत ३, नेपाली साहित्यकार, कलाकार तथा सर्जकले यो दिनलाई प्रजातन्त्रका लागि गरिएको त्याग तथा समपर्णको दिनका रुपमा लिने गरेका छन् । २०४६ सालमा निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाको बिरोध तथा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पक्षमा भएको आन्दोलनको क्रममा साहित्यकार, कलाकार तथा सर्जकले पनि सक्रिय सहभागिता जनाएका थिए ।
परोपकारी कविता वाचनवाट ३४ लाख संकलन
चितवन, चैत १ – चितवनमा मानव सेवा आश्रम सञ्चालनका लागि कवि रविन्द्र मिश्रको एकल कविता वाचनबाट ३४ लाख रुपैयाँ संकलन गरिएको छ ।
राष्ट्रिय कविता महोत्सव चैत १४ गते
काठमाडौं फागुन २८ - नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आउँदो चैत १४ गते राष्ट्रिय कविता महोत्सव गर्ने भएको छ । पटक पटक विभिन्न कारणले स्थगित हुन पुगेको सो महोत्सव यस पटक निर्धारित समयमा गर्न लागिएको हो ।
​दीनबन्धु शर्माकोे कथासंग्रह ‘भत्किँदै किल्लाहरु’ सार्वजनिक
काठमाडौं, फागुन २७ – प्राध्यापक डाक्टर दीनबन्धु शर्माकोे कथासंग्रह ‘भत्किँदै किल्लाहरु’ को काठमाडौंमा विमोचन गरिएको छ ।
​झमक घिमिरेको जीवनमा अाधारित फिल्म निर्माण सुरु
धनकुटा, फागुन २७ – साहित्यकार झमक घिमिरेको जिवनीमा आधारित फिल्म ‘जीवन काँडा की फूल’ को छायाँङ्कन सुरु भएको छ । पुरस्कार विजेता बनाउने आत्मकथा ‘जीवन काँडा कि फूल’ नामक पुस्तकमा आधारित भएर फिल्मको छायाँङकन सुरु भएको हो ।
​सञ्चार उद्यमी तथा गायक राकेश लामिछानेको निधन
काठमाडौं, फागुन २३ - सञ्चार उद्यमी तथा गायक राकेश लामिछानेको निधन भएको छ । श्वास प्रश्वाससम्बन्धि समस्या भएपछि नर्भिक अस्पतालमा भर्ना भएका ५१ बर्षका लामिछानेको उपचारका क्रममा आइतबार विहान निधन भएको हो ।
राष्ट्रिय कलाश्री सम्मान वात्स्यायनलाई
काठमाडौं, फागुन २३ – नेपाली कला साहित्य डट कम प्रतिष्ठानले यस वर्षको राष्ट्रिय कलाश्री सम्मानबाट व्यङ्ग चित्रकार दुर्गा बराल वात्स्यायनलाई सम्मानित गरेको छ ।
भारत, फागुन २१ – दिल्लीमा उपचार गराइरहनुभएका वरिष्ठ संगीतकार अम्बर गुरुङ शुक्रबार अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुँदै हुनुहुन्छ । स्वास्थ्यमा सुधार हुँदै गएपछि उहाँलाई डिस्चार्ज गर्न लागिएको हो ।